Asoosama “DHEEBUU JAALALAA” KUTAA 2FFAA-Rbuma Ggcn’tiin – Beekan Guluma Erena
Asoosama “DHEEBUU JAALALAA” KUTAA 2FFAA-Rbuma Ggcn’tiin	Beekan Erena
Asoosama May 19, 2016
Asoosama “DHEEBUU JAALALAA”
Yeroo deemanitti Eden mana kitaaba Girmaa W/Goorgis (mana dubbisaa isa guddaa) biratti hiriyyoota ishee waliin dhaabatte haasoftu arge. Yeroo argutti ammas akkum dhaabateetti hafe. Isheenis waan argiteef “ayachu ihe iko new simen class wusx ye xeragn” jette hiriyyoota ishee itti kolfisiifte. Innis bakka dhaabateetti akka muka eleektiriikii dhaabate hafe. Hiriyyaan isaas Caalaa maal taate ni deemna ka jedhe fuudhe deeme. Caalaanis akka nama dhugee machaa’ee hanga ishee bira darbutti As_Achi_Gama_Gamas jecha miila walxaxeen du’aan isaa ishee bira darbe. Isaan ammayyuu itti kolfu, hiriyyaan isaas ati maal taate barumsaaf dhufte miti? Caalaanis Eeyyee, garuu…. jedhe cal jedhe. Kaaffee isaani nyaatani hiriyyaa isaa waliim buna dhuguu gara mana bunaa naannoo kiliinika yuniversiiticha argamutti deemani.
Yeroo mana buna kana dhaqani buna ajajatanii dhuguu eegalanitti Eden fi hiriyyaan ishee tokko mana buna kana dhufani. Caalaanis waan argeef siinii buna itti dhugu sana naasuun lafatti harkaa buute. Eenyuu…_…si…_… ati maqaan…_…kee…_…eenyuu…_…i… Bar suma Tolasaa Tolasaa ka’i… Ka’i… banne banne jedhe ol ka’ee gad taa’a akka nama waaqa kadhatu oli gadi jedha.
Hiriyyaan isaas maalidha… Maaltu dhufe jedhe hin baana ka’i ka maalidha? Eenyuu faa’adha isaan poolisii gibbii faana wal loltettaa? Moo maalidha? Jedhe qarshii buna kaffaluuf gad baasu, Eden mana buna kana ol seente. Tolasaan Muu! Caalaa ati mee… Maal isheetu nama sodaachisa kan akkas sodaattu dhiira miti maali si ajjeeftti moo? Maaltu akkas si godha jedhe aaree gad taa’e.
Caalaanis, lakki duunerra maarre nu reebddi ilaa kuunno ulee baatte deemti kunno madhoofte… Wayyoo! Wayyoo! Ka’i… Ka’i… Banne Banne hin baana jedhe akka nama hatee fiiguutti mana bunaa sanaa kan bahe doormii isaatti of argee. Hiriyyaan isaas waa’een Caalaa waan isa dhiphiseef baayyee ofitti aaraa bilbila bilbileef Caalaanis bilbila kaasee H_e_l_l_o! H_e_l_l_o! Sagalee cicciittuu tokkoon itti dubbate. Hiriyyaan isaas koottu isa dhiisiti amma mana dubbisaa biratti koottu jedhe yaame. Tole! Nan dhufa… nan dhufa… Na eegi jedhe bilbila cufe. Tolasaan yeroo Caalaan dhufu k!k!k!k!k!k!k! jedhe kolfa kutee keessa fuudhe. Caalaanis natti kolfuuf na waamte ati maal rakkatte ana malee kan yeroo ishii argu kanin dhugu, nyaadhu dhiisefii baqate deemu jedhe. Silaa “garaa jaalate gowwaadha” jedhama mitiire?
Hiriyyaan isaas garuu maal si gooti yoo fiiguu baatte tasgabboofte hin teessu? Silaa ati akkasumaaf baqatta jedhen. Caalaanis, lakki! Isan nyaadhu dhugu kanin dhiisuf waan fuute dhugde nyaatte naaf quuftu natti fakkaata kanumaaf ka! Jedhe dhaabate. Garuu,Tolasaa ani ishee nan jaaladha kanaaf malee waan bira miti jedhe yoo deebisuuf, Hiriyyaan isaa ammas h!h!h!h! Jedhe itti kolfe maal jette yaadatta? Yeroo darbe ani jaalalaan hin qabamu hangan Eebbifamutti hin jenne? Jedhe gaafate. Amma isa dhiisi boru yeroo isheen kaaffee nyaatte baatu sii gaafannaa jedhe itti Caalaatti hime.
Tole! Garuu… Maalin jedhaan isheeno Afaan saba ko afaan oromoo hin beektu maala godha? Jedhe Tolasaa gaafate Tolasaanis dhiisi isa anuu siifin gaafadha afaan isheen haasoftu nan beeka, qormaata biyyoolessaa iyyuu C- qaba jedhe itti qoose. Isaanis walii galani. Galgala waan ta’ef akka bariitu isaa gaafatanis walii galani. Laftis dhiite bariite isaanis Eden barbaacha isheetti ka’ani. Eeboo fi gaachana hin qabanneef malee innaadhuma gootni oromoo waa booji’uu dhaqan fakkaatu. Eden doormii isheeti gad baate. Gara mana dubbisaa qo’achuu dhufte…
# itti fufa kutaan 3ffaa
← DHUKKUBOOTA DUBARTOOTA QOFA HUBAN KEESSAA…kan fayyisuun ulfaatu, garuu ittisuun fala ta’u;Bilisummaa Gadaa Ifaa’tiin (BGI)
SHIFTUMMAAFI WANBADUMMAADHAA?-Jaaawar Mohaammadii’n →